About barnaamijyada SD oo lacag la'aan ah soo kabashada card
Waxaa jira barnaamijyo badan oo software jira online si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa dadka isticmaala marka ay timaado soo kabashada xogta. Waxaa sidoo kale in la xuso in user Hubi in ka dhigi kartaa in barnaamijka ugu wanaagsan ee aan la doortay oo kaliya laakiin ay la xidhiidhaan geedi socodka ayaa sidoo kale codsatay. Hoos ku xusan yihiin barnaamijyada soo kabashada sare card 5 SD in user ah u isticmaali kartaa si aad u hubiso in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa lagu riyaaqay ee la xiriirta kaarka SD oo ka soo kabsanaya dhaawacyo kale xusuusta kaydinta.
Inta badan dadka ka fikirayn Recuva in ay sida ugu fiican oo qalab ugu horumarsan u soo kabashada drive adag laakiin barta in la ogaadaa waa in barnaamijkan ayaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si loo hubiyo in kaarka SD la soo kabsaday kasta oo dib u dhac iyo arrin aan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican iyo farsamooyinka ugu horumarsan gundhig gudahood barnaamijka waxaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan arin kasta sameeyo:
• version la qaadan karo uu jiro si ay u taageeraan hindiseen
• Waxaa fiican ee user kasta sida hab saaxir ah waa ay fududahay in la raaco
• dajinta ee barnaamijka Waa yara adag tahay in ay sameeyaan
• Talooyinka dheeraad ah iyo barnaamijka downloads ayaa iyana la bixiyaa.
Oo weliba qalab awood badan oo kale in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay waxaa la siiyaa oo la xiriirta soo kabashada xogta taas oo aan marnaba si sahlan ugu dhigi lahaa. Laga soo gaartay shil ah si faylka formatting qalab ay tahay mid laga cabsado si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka waxaa lagu bixiyaa si user ah in arrintan la xiriira. Barnaamijka waxaa si weyn lagu talinayaa in kuwa aan celcelis ahaan oo kaliya user computer, laakiin aan awoodin in ay la tacaalaan barnaamijyada la iska istareexsan!
• user wuxuu hubin doonaa in ka badan 50 qaabab ay si sahlan u soo kabsaday ka dhigi kartaa
• Natiijada sifeeyay in sidoo kale la soo ururin karin si loo hubiyo in doorashada file wuxuu noqonayaa fudud.
• macaamiisha shirkadaha ayaa la dayacay oo kaliya dadka isticmaala guriga waxaa lala beegsaday.
• Waxa kaliya oo ay taageertaa version daaqadaha dambeeyay.
Barnaamijku waxa uu la soo saaro ilaalinta ee aragtida dadka isticmaala oo si joogto ah arrinta card SD xogta khasaaro wajihi sabab u sabab kasta. Waa mid ka mid ah barnaamij uu yahay isticmaalka taas oo keliya ma aha, laakiin user sidoo kale hubin karaa in in ay ka kooban iyo khariidad ee barnaamijka waxaa modified sida ay tahay doonista iyo baahida si element ee shaqsinimo lagu daray fudayd iyo ku qanacsan tahay.
• Waxa aad u fududahay in la isticmaalo sida interface uu yahay mid aad is-dhexgal
• Waxa ay taageertaa kala duwan oo intooda badan nidaamyada file in isticmaalka maalmahan
• tayada file iyo caafimaadka marnaba shaaca ka qaaday.
• Waxaa nasiib darro ma jirto version la qaadi karo oo kaliya rakibo drive adag waa laga heli karaa.
Barnaamijka ayaa ku jirta gacanta dadka isticmaala ee waqti dheer ah hadda iyo kaamilka ah oo ka mid ah qaybaha kala duwan waxaa had iyo jeer la casriyeeyay si ay u dhawrto user barnaamijka saaxiibtinimo. Waa barnaamij taas oo ka dhigaysa hubiyo in labada arday iyo sidoo kale khubaro waxaa lala beegsaday hab la mid ah si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u isticmaalka arrintan la xiriira iyo waxtarka barnaamijka kale waxaa lagu hayaa ee ugu wanaagsan ee suurto gal ah hab. Barnaamijku waxa uu shaki la'aan waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee jeer oo dhan.
• Cabbirka barnaamijka waa mid aad u yar yar oo qaadataa meel disk yar.
• wax soo saarka sahlan oo macquul ah ee barnaamijka waa u fududahay in la fahmo.
• Barnaamijka wuxuu leeyahay maqnaansho ah nooca la qaadi karo oo ma ah calaamad fiican.
• Inta lagu guda jiro rakibo barnaamijyo kale ayaa sidoo kale hadalkiisa ku daray isagoo aan aqoon lahayn.
Iyada oo fudud si ay u isticmaalaan saaxir barnaamijka uma baahna hordhac ah sidii ay u isticmaalaan dadka adduunka oo dhan si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa loo isticmaalaa oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijka ma aha oo kaliya oo lacag la'aan ah, laakiin casriyaynta ayaa waxaa sidoo kale lagu eedeeyay in marnaba taas oo ay doorashada ugu fiican ee mar walba ka dhigaa.
• saaxir ah ee barnaamijka waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo ay hirgeliyaan
• Barnaamijku wuxuu guud ahaan waa yar yahay in xajmiga iyo si isticmaalka meel disk waa mid aad u yar.
Ma jiro version qaadi karo barnaamijkan taas oo khasaaro ugu weyn ee tan gabal laga cabsado.
Qataarradii qalab browser rakiban yihiin halka ilaa set barnaamijka ee waxaa maamula iyo sidoo kale waa mid ka mid ah darrada ah.
Waxaa shaki la'aan waa waxa ugu fiican oo qalab ugu horumarsan si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo oo user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka. Waxaa jira qaar ka mid ah sifooyinka barnaamijka taas oo ka dhigaysa xaqiijiso in uu noqdo ciyaaryahanka ugu fiican marka loo eego barnaamijyada kale ee software in lagu halkan ku xusan iyo qaababka waa sida soo socota:
1. Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa 550+ qaabab file kaas oo mid ka mid ahaa barnaamijyada kor ku sameeyo.
2. Waxaa jira 2 hababka soo kabashada xogta ie saaxir iyo hab sare.
3. Barnaamijka ayaa lagu qiimeeyaa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee ay dadka isticmaala ee adduunka oo dhan.
4. user ayaa hubiyo in lacagta la onetime keenaysaa in casriyaynta mar nolosha oo lacag la'aan ah ka dhigi kara.
5. Wondershare hubiyaa in taageerada 24/7 jiro si ay u caawiyaan dadka isticmaala iyo ma jiro oo ka mid ah barnaamijyada kor ku xusan waxay leeyihiin taageero sida.
> Resource > Memory Card > Top 5 SD FREE software kabashada card